I-Dammuso della Loggia - I-Airbnb
I-Dammuso della Loggia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Francesco
I-Il Dammuso della Loggia itholakala edolobheni laseNoto, iNdawo Yamagugu Omhlaba ye-UNESCO futhi iwuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka e-Via Nicolaci, edume umhlaba wonke nge-Infiorata.
Ithokomele futhi ithule, i-Dammuso ijabulela indawo ekahle yokuvakashela idolobha lonke ngezinyawo.
Ifulethi litholakala imizuzu engama-20 ngemoto ukusuka eVendicari Nature Reserve, imizuzu engama-25 ukusuka eCavagrande Nature Reserve, imizuzu eyi-10 ukusuka kuthelawayeka oya eCatania.
I-Dammuso della Loggia iyifulethi elithokomele futhi elithule elisenkabeni yedolobha laseNoto; esanda kulungiswa, ifakwe indawo yokungena ezimele kanye negceke langaphandle elizimele elilungele ukudla kwakho kwasekuseni, ikhishi, isimo somoya, i-wifi nomabonakude.
Ngenxa yesikhundla sayo kuzokuvumela ukuthi ube senkabeni yempilo yedolobha ngaphandle kokuphazamiseka kwezimoto nomsindo ophazamisayo.
I-Il Damuso della Loggia itholakala komunye wemigwaqo emidala futhi ebaluleke kakhulu yedolobha, i-Via Rocco Pirri; umgwaqo oxhumanisa i-Via Cavour ewubukhazikhazi, ikhaya lezigodlo ezibaluleke kakhulu zaseNetini, ukuya eCorso Vittorio Emanuele, umgwaqo omaphakathi onikeza umbono wawo wonke umbukwane wezakhiwo zeBaroque Netino.
Ngaphandle kwendawo yayo enamasu, ngeRocco Pirri idume ngeLoggia ewubukhazikhazi beMercato di Noto, indawo enhle yedolobha yobuciko, amasiko kanye ne-gastronomy kanye nokunikezwa okubanzi nokucwengisisiwe kwezindawo zokudlela nezindawo zokucima ukoma, ubuhle bangempela emkhakheni. wokupheka.
Ekugcineni, isakhiwo esihlala i-Dammuso siyisibonelo esicwengisisiwe sezakhiwo zokuhlala zaseBaroque zamuva, ezakhiwa ngo-1700 futhi eduze kwesigodlo seNkosana uNicolaci di Villadorata.
Ukuze ngikuqinisekise ukuhlala okungcono kakhulu ngangokunokwenzeka, nginikeza ukutholakala kwami okuphelele ukuze ngiguqule amaholide akho abe yinkumbulo ejabulisayo.